Book News: Manohana ny paikady hiadiana amin’ny fiparitahan'ny pesta ny Usaid - Malagasy
“Mianaka manerana ny faritra maro ny valan’aretina pesta eto Madagasikara. Hatreto, mbola tsy voafehin’ny fanjakana ny fiadiana amin’ity aretina ity. Eo anatrehan’izany, nanolon-tanana ny masoivoho Amerikanina amin’ny alalan’ny Usaid.”
Pesta: mitondra ny anjara birikiny ny Usaid
Hatramin’izao, mbola tsy voafehy ny fipariahan’ny valan’aretina pesta. Mitombo hatrany ny olona voan’ity areti-mandoza ity. Araka ireo tarehimarika farany, nahitana tranga vaovao 31 indray teto Antananarivo, omaly faha 11 oktobra 2017. Niantso ireo mpiara miombon’antoka aminy hanohana ny ezaka ataony amin’ny fifehezana ny aretina ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, nanomboka ny 10 oktobra lasa teo.
Niara-nisalahy tamin’ireo mpiara-miombon’antoka hafa ny Masoivoho amerikanina ho fanampiana an’i Madagasikara amin’ny ady atao amin’ny pesta.
Cc: Masoivoho amerikanina
Nitondra ny anjara birikiny ny masoivoho Amerikanina ho fanohanana ny governemanta Malagasy. Nisy ny fananganana vaomiera teknika nasionaly sy isam-paritra hamaritana ny drafitra handrindrana ny fomba entina miatrika ny pesta. Nampiasaina ihany koa ny rafitra misy ireo mpanentana ara-pahasalamana izay nampetraky ny USAID tamin’ny faritra 15 hanamafisana ny fiatrehana ny valan’aretina eny ifotony, toy ny fanentanana ny fiarahamonina, ny fanantonana ireo marary, ary ny fandraisana anjara tamin’ireo fepetra fanadiovana sy fanarahamaso, araka ny vaovao voaray avy tamin’ny Masoivoho.
Violette Kakyomya avy amin’ny OMS eo anilan’i Robert Yamate, Masoivoho amerikanina.
Fotoana mampianaka ny valan’aretina pesta ny volana oktobra sy novambra. Ny tsy fanantonana mpitsambo haingana raha vao miseho ny fambaran’aretina anefa no tena mampirongatra azy. Azo fehezina tsara anefa ity aretina ity, ary azo atao ihany koa ny mitsambo azy. Ho fandraisana an-tanana ireo marary ary, nanolotra fiara 10 hitanterana ireo mararin’ny aretina pesta ny masoivo Amerikanina, fiara 4 hampiasaina amin’ny fanentanana ifotony ary mangazay hitehirizana ireo fitaovam-pitsamboana samihafa. Nisy ihany koa, ny fanomezana fonon-tanana miisa 230 000 sy tampim-bava miisa 100 000. Ho fanatanterahana ireo tetikasa, nisy ny fanohanana teknika avy amin’ny CDC na Center for Disease Control an’ny USAID. Maro ihany koa ireo ekipa avy amin’ny CDC tonga eto Madagasikara hiara miasa amin’ny OMS hifehy ny fianakin’ny valan’aretina pesta.Miara miasa amin’ny OMS sy ny UNICEF ary ny OCHA niaraka tamin’ireo fikambanana iraisam-pirenena hafa tamin’ny fandrindrana sy ny fanantaterahana ireo tetikasa notohanan’ny USAID ny masoivoho Amerikanina . Eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena izay manana andraikitra lehibe amin’ny fifehazana ny valan’aretina.
Miteraka ahiahy hoan’ireo firenena maro samihafa ny fimparitahan’ny valan’aretina pesta eto Madagasikara. Marefo tanteraka ny sehatry ny fizahan-tany vokatr’ity aretina ity. Ny fanamafisana ny fanadiovana sy ny fidiovana ihany anefa no vahaolana handresena izany. Tomponandraikitra amin’ny fifehezana ny fiparitahan’ny aretina araka izany ny tsirairay.